राप्रपाले ५ वैशाखसम्म उम्मेदवार यकिन गर्ने « रिपोर्टर्स नेपाल
राप्रपाले ५ वैशाखसम्म उम्मेदवार यकिन गर्ने
प्रकाशित मिति : 2017 April 11, 7:25 am
काठमाडौं २९ चैत । सत्तारुढ दल राप्रपाले ५ वैशाखसम्म गाउँपालिकाका सबै पदमा उम्मेदवार बन्नेहरूको नामावली यकिन गरिसक्ने तयारी गरेको छ । ३१ वैशाखका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख्य कार्य पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिकलगायतका काम पनि सोही मितिमै सक्ने तयारी पार्टीको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले जित्ने सम्भावना भएका स्थानमा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतलाई उम्मेदवार बनाउने रणनीति बनाएको छ । पार्टीको त्यही रणनीतिअनुरूप केन्द्रीय पदाधिकारीलाई समेत उम्मेदवार बनाउने गरी दुई उपमहानगरपालिका र नौ नगरपालिकामा टिकट पक्का गरेको छ ।
राप्रपाले पार्टी महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणालाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । उनी यसअघि नेपालगन्ज नगरपालिका हुँदा मेयर भइसकेका छन् । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राणा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए ।
धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष स्व. सूर्यबहादुर थापाका नाति सिद्धार्थ थापालाई राप्रपाले मेयरको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी महामन्त्री सुनील थापाका छोरा सिद्धार्थलाई मेयरको टिकट दिने निर्णय पार्टीले गरिसकेकोको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।